बालसाहित्य प्रतिष्ठान नेपाल: 2017-04-09
अन्तराष्ट्रिय बालपुस्तक दिवस तथा हान्स क्रिस्चियन एन्डर्सनको जन्मजयन्तीका अवसरमा ‘केटाकेटी अनलाइन किताब नभएका ठाउँमा किताब’ कार्यक्रमका लागि नगद रु. २५००/- (अक्षरुपि रु दुई हजार पाँच सय मात्र) सहयोग गर्नु भइ सन्ध्या सामुदायिक पुस्तकालयलाई पुस्तक सहयोग गर्न सघाउनु हुने सिक्किमका आदरणीय अग्रज व्यक्तित्व श्री सी. पी. गिरिज्यूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं । यस कार्यक्रममा सहयोग गर्न चाहनुहुने दाताहरुले केटाकेटी मिडियाको चल्ती खा.नं. ००१०००१०४४००१ (सानिमा विकास बैंक, नक्साल, काठमाडौं) मार्फत् सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।